KUUNNOO KUNOO GOOTE!! – Beekan Guluma Erena
KUUNNOO KUNOO GOOTE!!	Beekan Guluma Erena
Poems April 25, 2016BEEKAN GULUMMAA
238SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
Kuunnoo!, kunoo! Goote!
Kaleessahoo mitii kan nuti walagarree
Jaarraa dhiphinaadha nu wali in dabarree
Lakkoofsisnee waggaa tokko lama jechaa
Kunuunsa keen ceenee danuu tarkaanfachaa
Baras bara sana yeroo daa’imummaa
Bara yaadni abjuu bara ijoollummaa
Herreegaan na qabdee yaadaan na utubaa
Kee yoon hin dubbannee keessa koo na guba!
Yaada kan koon mitiim filannoo keen malee
Isa gaafa sanaa hin dagadhu yoomillee
Bara namni hin jirree dachaa lafa onaa
Na waliin imaltee naaf taatee jabina
Guuboon dhiphinaadha sammuu koo yaabbatee
Bara abdiin dhumee naansitu utubatee
Kanaaf kan kee dursee dubbata afaan koo
Galatoomii mootii! Ulfaadhus waaqakoo!
Kuunnoo! Kunoo gootee achii as harkistee
Boojuu koo boojuudhaan dachaayyuu deebistee
Tumsi kee ni caalaam anaan dadhabbii koo
Ati goolabdeettam boruu egeree koo
Kees waan jedha harme!
Itti aantuu waaqaa atis utubduudha
Gorsi afaan keetii dammaaf itittuudha
“Jabaadhu! Dhalakoo cimii nama ta’ii!
Rakkinaas gidiraa obsuudhaan danda’ii!”
Jettee na sossobaa dadhabdee dhamaatee
Abjuun kalee kunoo si’iin dhugaa taatee!
Gargaarsa kee ani akkamittan dhoksaa?
Rakkina koo danuu ansilaaleen obsaa!
Hunda caaltuun si’ii! Atinaaf waa maraa
Dhugaa gargaarsa keen nama ta’aan jira!
Abbaa koof obboleen warri naa utubdan
Bitaaf mirga ta’uun kanneen naaf birmattan
Ofii rakkoo ibsaa anaaf waa hiixachaa
Bakka rakkina koo kan dhuunfaa godhachaa
Hin hirraanfatamuum gumaachi keessanoo
Kunoo! Ta’e amma! Inni durii kuunnoo
Sinis hiryooti Koo…..
Dhabnuu liqeeffachaa qabaannaan bitachaa
Waliin waliif taanee nooraadhaaf riqichaa
Dhandhama jireenyaa hadhooftuu mi’eessaa
Abdii walitti horree sobaan wal jabeessaa
Inni nuti I mallee kunoo ta’e amma
Dandiin nuti imallee baraan yaadatamaa
Bakka maatii ta’uun rakkoo wal gansiisaa
Dachaan baanee sunoo danuu dadhabsiisaa
Jabaadhaa yoomillee nuti waliin jirraa
Gadadoo jireenyaa bor nutu jijjiiraa!!!
Atis yaa jaalallee…….( kophaaf)
Kee katabuuf jedheen barbaadee si dhabee
Siidaa jaalala koo kophaa koo siif dhaabe!
Si’i kan nan gannee hiryaa yeroo maraa
Ati jaalalleedhaam ishee barabaraa!
Ati na utubdaam gorsaan cina kootii
“Hin ariifatiin kaa suutaa qaqqabdaatii!”
Innati naan jettuu kophaan jaalalleen koo
Yoomu sin dagatuum siin tasa onneen koo!
Isin hin komadhuu warraa diina kootii
Milkoommii koo jibbuun kan gungumtan nattii
Egaa na ilaalaa ani milka’eeraa
Kiyya egereefuu gaariin qophaa’eeraa
Xiqqoosheen sin gorsaa maaloo na dhagahaa!
Eelee inaaffaarraa lafa bu’aa ta’aa!
Hundaaf gaarii hawwaa yoosoo gaarii argattuu!
Kun hun tahu taanaan baraan waxalamtu!
Bu’aa bahii jireenyaa dheeraa; qabsoon harra geesse kana, jechootaan katabee xumuruun ulfaataadha! Garuu godaannisa kaleessaa, sobnee fayyaa fakkeessinee;keessaan bohaa,kolfa sobaan hidhii addaan saaqnee seequun dirqama taanaan malee kan barbaannu hunda harkatti galfanneefis miti! Dhugaadha harra koo kana akkan gahuuf maatiif firoonni koo hiryaaf aantiin na utubdanif jechoota galata namummaa madaalan isinitti hin hanqisuu guutee kan danbali’eedha malee!
Kee dubbachuuf halkan ati kalqite; guyyaa ta’ee, osoon baran jiraadhe keessatti oolmaa kee dubbadhee,dachaan umurii an jiraadheyyuu nan gahu! Siif jechooti galataaf uumaman na hanqachuusaaniif malee akka olmaa keef isa hundarra caaluutu si madaala! Siif afaan koo Galata roobsaatii bara baraan galatoomi! Situ akka namaa mitiif malee silaa baayyeen addunyaa jireenyaa keessaa nu baasanii dachaa lafa onaatti nu darbatu turan! Egereefis si abdanna! ,si qabnas! Sitoo riqicha ittiin gidiraa tarkaanfataniidha!
Yaa uummata baldhaa isinirraa dhaladhee, kan akka koo kuma kitilaan qabduutii gammadaa! Addunyaan gadadoon guuttee kaleessaafi harraa bor iftaan kan muldhattu mitiitii; gaara irra dabarsaatii guyyaa egeree ishee iftaan boodaa sana ija yaadaan ilaalaa!
(Fedhesaan) yaadannoonsaa imimmaan harmeef!
Ijoollee ol adeemoof qaroo hagamii mootummaa Wayyaaneetiin dhabne laata?-Itti yaadaa!
Yaada Keessan kan toora FB kanaa gadirratti kennaa238SHARESKana TamsaasiKana Tamsaasi
← OLANTUMMAA MIIDIYAA
BARATU FAALLAA TA’E!! →